Lawa igama Australian eside kwaziwa ukuthi umphakathi umculo emhlabeni. Umculi nombhali ekuqaleni ukunqoba Olympus ngo-1997 lapho eseneminyaka olukhishwe "ukubona kuphela" albhamu yakhe yokuqala. Kulo msebenzi wakhe yena ukhiphe amarekhodi eziyisithupha futhi wathola ukuthi kuqokwe abantu eziningi, kuhlanganise "Grammy". ukusebenza kwakamuva okuye kwabangela imibuzo eminingi: kungani Sia efihla ubuso bakhe ngamabomu?
Indlela olunameva empumelelweni
Nakuba i-albhamu aseqala yatholwa abalaleli, kuhlale mgwaqo omude obheke ukuqashelwa emhlabeni jikelele. Impumelelo irekhodi "Abanye abantu babe nezinkinga Real" wenza ukusaphazela ngo-2008, kusukela kuleso sikhathi isigaba esisha umsebenzi wakhe. Wakwazi sivuse isithakazelo umphakathi, okuyinto esanda okwengeziwe zaba zimbi. Hhayi ukuthi kwakwenzekani kuye, abalandeli ukubuza ukuthi kungani Sia alibonisi ubuso bakho?
Mhlawumbe impendulo kuzosiza amaqiniso Biography of inkanyezi. Ekuqaleni kuka-2012, wayekade kakade wakhuluma kokushiya. Ukuze baphile nge umuzwa njalo wenkazimulo, kuba nzima, ikakhulukazi ezingeni ngokomzwelo. Umculi babefuna ukubuyela emuva kulabo iminyaka lapho impumelelo enkulu ngisho bawa phezu kwamahlombe akhe eqinile, nakuba owasuka emsebenzini, lapho ebuya soundtrack kuya ifilimu "The Great Gatsby".
It kushintsha ukuziphatha umculi kwakungenakwenzeka ukuba uphawule. Umbuzo uwukuthi, kungani ungabonisi ubuso Sia, lisavuliwe. Ukushayelwa athandwa yena ehlangene ukungakwazi ukuba sibhekane ngokuphumelelayo nesimo udumo. Futhi kubonakala, uthole indlela yokuphuma: makakutholele indawo komunye ukusebenza, njengoba eya esiteji ngemuva. abalandeli azinikele wabuye waphendukela ukuphila Thixo wakhe, bafumana izenzakalo ezimbalwa ezingase zibe nomthelela. Lezi zihlanganisa emphilweni kanye izakhiwo ngokubukeka kwabo, futhi umuntu ngisho ngokuthi amaningi ubuntu sifo. Ekuphileni, umculi babenezinkinga utshwala nezidakamizwa, sengqondo ukwenama-bacindezeleke , futhi -Graves 'disease.
Isizathu yokuxoxa ukuziphatha babezizwe umculi waqala ukusebenza yakhe yamuva. Abalandeli bababopha nge ukukhululwa kwe-albhamu "1000 Amafomu Ukwesaba", ngokwezwi nezwi ihumusha ngokuthi "izinhlobo 1000 ngenxa yokwesaba."
ukugwema ngokucophelela amakhamera on the show Ellen DeGeneres ngenkathi enza inkulumo yakhe, umculi wema enkundleni, waphendukela odongeni. umdansi oneminyaka engu-11 ubudala uye riveted ukunakwa izethameli, umdanso ongaphambili. Isiqophi eqoqwe angaphezu kwezigidi ezingu-25 ukubukwa ku-YouTube, futhi wonke umuntu wazibuza ukuthi kungani Sia alibonisi ubuso bakhe.
Ngo ukusakaza olunye uhlelo "Late Night ne uSeti Meyers" indawo enhle ziphuthume kwenye wanikwa actress yochungechunge "Girls" Line Danem. Lo mculi wafakwa embhedeni embhedeni futhi wamboza ubuso komqamelo, futhi sike sahlangana amehlo izilaleli. Ngakho, abadansi enze ngomfanekiso umculi noma ukukhombisa ukusebenza izingoma zakhe, nakuba kusobala futhi ecacile, empeleni uyacula.
Kungani umculi Sia alibonisi ubuso bakho? Ulwazi izinguqulo
Okokuqala, zihlotshaniswa ngobuqili, ubutha nabezindaba. Isifiso ufulathele umphakathi kungaba wagcizelela injongo ukukhombisa ubani ngaphezu kwakho konke kuba - umculi umculi, ngakho kumelwe athathe isikhundla yesibili, yadedela isenzo senzeka enkundleni.
Fans of the umculi uxoxisana ngaleli qiniso futhi bephikisana. Bakhumbula amazwi wayekhathele amakhamera Njalo wayeqondisa wakhe ebusweni. Mhlawumbe, ka Sia akafuni ukukhanyisa esikrinini, ngoba "ukunyamalala" yesikhashana yesehlakalo izinto uqondakala kahle.
parallel ayeba ne isihloko se-albhamu. Sia Kungani wena ungabonisi ubuso bakho? Kuyinto uhlobo yokwesaba, kuyinto isidingo sokuqondisa ukuxhumana izilaleli, njengoba ofunda irekhodi zokugcina. The main wukuthi ukusebenza umculi e-Ukuziphatha uhlobo njalo uyagijima ezingeni eliphezulu kakhulu. Futhi wakhe kuphela ufisa ukuze asebenzelane nabo bonke izakhiwo zalo. Uma Yebo, iyatholakala.
Boys Band: Amaphrojekthi yimpumelelo kakhulu
Ithebula table tennis for engadini: ukusetshenziswa, imihlahlandlela ngokukhetha futhi ukuhlangana bebodwa